/ iimveliso / IiReagents zeR & D / Bevacizumab (216974-75-3)
SKU: 216974-75-3. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-Bevacizumab (i-CAS 216974-75-3), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Bevacizumab powder ikwahlula "njenge-antioclonal antibody" kunye ne "anti-angiogenesis" yeziyobisi.I-Bevacizumab inikezwa ngokungenisa ngaphakathi kwintlambo (intravenous, IV). Inqanaba lokuqala linikwe imizuzu ye-90. Ixesha lokunyusa lingagqithiselwa kwiminithi ye-30 ukuba ikhuthazwe kakuhle ...
Bevacizumab Abalinganiswa basisiseko
I-molecular Formula: C6638H10160N1720O2108S44
Isitoreji sokugcina: 2 - 8 ° C
Ukusetyenziswa kwe-Bevacizumab (216974-75-3) kumjikelezo we-steroids
I-Bevacizumab (i-CAS 216974-75-3), ebizwa ngokuba nguAvastin noMvasi.
I-Bevacizumab iza njengesisombululo sokuphatha ngokukhawuleza kwisithambiso. I-Bevacizumab ilawulwa ngugqirha okanye umongikazi kwiofisi yezokwelapha, isikhungo sokungena ngaphakathi, okanye esibhedlele. I-Bevacizumab ivame ukunikezwa kanye emva kweeyure ze-2 okanye ze-3.
Kufuneka kuthathe imizuzu ye-90 ukuba ufumane umthamo wakho wokuqala we-bevacizumab. Ugqirha okanye umongikazi uyakukujonga ngokukhawuleza ukuze ubone indlela umzimba wakho uphatha ngayo kwi-Bevacizumab (216974-75-3). Ukuba ungenayo ingxaki enzulu xa ufumana i-dose yokuqala ye-bevacizumab, ngokuqhelekileyo kuthatha i-30 kwimigqa ye-60 ukuba ufumane ngalinye lezilwanyana zakho eziseleyo.
Inyolo yeBevacizumab ingabangela ukuphendula okukhulu ngexesha lokunyuka kwamachiza. Ukuba ufumana enye yeempawu ezilandelayo, xela ugqirha wakho ngokukhawuleza: ukuphefumula ukuphefumula okanye ukuphefumula, ukugubha, ukuthuthumela, ukujuluka, intloko, isifuba, ukuxakeka, ukuxakeka, ukuxubha, ukugubha, okanye ukuvuthwa. Ugqirha wakho unokufuna ukunciphisa ukunyuswa kwakho, okanye ukulibaziseka okanye ukuyeka unyango lwakho xa ufumana ezi okanye ezinye iziphumo.
Isexwayiso kwi-Bevacizumab (216974-75-3)
I-Bevacizumab inokuphazamisa ukuhamba kwexesha eliqhelekileyo kwaye inokuphazamisa ukondla ngemiphumo emininzi. Ezinye iiparameters aziyi kubuya ngokupheleleyo, okanye zibuye zibuye zihambe ngokukhawuleza emva kokuphuma kweziyobisi.
Amanqindi e-Monoclonal ayingxaki entsha yonyango lomhlaza. Ama-antibodies ayingxenye yesistim somzimba. Ngokuqhelekileyo, umzimba wenza ama-antibodies ekuphenduleni kwi-antigen (njengeprotheyini kwintsholongwane) engena emzimbeni. Ama-antibodies anamathele kwi-antigen ukwenzela ukuwuphawula ngokutshabalaliswa ngumzimba womzimba. Kwi-laboratory, izazinzulu zihlalutya ama-antigens athile kummandla weeseli zomhlaza (ekujoliswe kuyo) ukufumanisa iprotheni ukufanisa i-antigen. Emva koko, usebenzisa iipilisi kunye neeprotheni zabantu, izazinzulu zisebenza ukwenza i-antibody ekhethekileyo eya kufakelwa kwi-target target antigen. Ama-antibodies aya kufakelwa kwii-antigens ezifanayo ezifana nesitshixo sifana nekhikhi. Le teknoloji ivumela ukuba unyango lujoliswe kwiiseli ezithile, kubangele i-cells enobuchopho. Ulwaphulo lwe-antioclonal antibody lungenziwa kuphela ngee-cancer ezikhoyo (kunye nee-antibodies).
I-Bevacizumab (i-216974-75-3) isebenza ngokuphazamisa inkqubo ye-angiogenesis ngokujolisa nokuvimbela isifo se-endothelial growth factor (VEGF). I-VEGF yi-cytokine (iprotheni encinci ekhishwe ngamaseli aneempembelelo ezithile kwihambo yeefestile) xa idibaniselwano kunye nabamkeli bayo kwiiselingi ikhokelela ekuvelweni kwitshaba lwegazi okanye i-angiogenesis.
Indlela yokuthenga i-Bevacizumab ukusuka kwi-AASraw